‘द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरूपणबाट टुङ्गो’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरूपणबाट टुङ्गो’
२०७० चैत्र १८, मंगलवार ००:३५ गते
भरतपुर । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजी आयोगले मात्र गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
फुजेल घटनापीडित परिवार सङ्घर्ष समितिले सोमबार भरतपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न चितवन आउनुभएका डा भट्टराईले कृष्ण अधिकारीलगायतका सबै द्वन्द्वकालीन घटना पटके गिरफ्तारीबाट समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो । सशस्त्र संघर्षका बेला भएका घटनामा वर्तमान कानुनलाई आधार मानेर कारबाही हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘द्वन्द्वकालका घटनामा यसरी एक÷एक जनाको विषयमा छानविन गर्नु शान्ति सम्झौताको उल्लंघन हो । यस्ता घटनाको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर हुनुपर्छ भन्ने सम्झौता हो । जुन सरकारले तोडेको छ’ भट्टराईले भन्नुभयो । आयोगले सत्य खोज्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
मेलमिलाप हुन नसक्ने मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा कोही संलग्न छ भने त्यस्तालाई पनि कानुन बनाएर मात्रै कारबाही हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । ‘पहिला त मेलमिलापको वातावरण नै बनाउने हो । तर गम्भीर अपराधमा मुछिएको छ, माफी दिन लायक छैन भने पनि कानुन बनाएरमात्रै कारबाही हुनुपर्छ’ भट्टराईले भन्नुभयो ।
आयोग बनाउन माओवादीले बारम्बार प्रयास गरे पनि अवरोध आएकाले सम्भव नभएको भट्टराईको भनाइ छ । अब भने चाडै नै आयोग गठनका लागि संसदमा विधयेक लाने उहाँले बताउनुभयो । सवैको चासो बनेको कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणमा बारेमा माओवादीले पनि केही छानबिन गरे नगरेको बारेमा सोध्दा उहाँले नगरेको बताउनुभयो ।
‘कृष्ण अधिकारी के कसरी मारिएका हुन् भनेर हामीले छानबिन गरेका छैनौं यो विषय त्यही सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले नै गर्ने हो हामीले होइन’ भट्टराईले भन्नुभयो । घटनाका आरोपितहरुले संघर्ष समिति नै निर्माण गरेका छन् । विस्तारै संघर्षका थप कार्यक्रमहरु पनि गर्दै जाने समितिका संयोजक अजिव पौडेलले बताउनुभयो । उनी पनि आरोपित ११ जनामध्येका हुन् ।
सशस्त्र संघर्षका बेला विसं. २०६१ सालको जेठ २४ मा सुराकीको आरोपमा कृष्ण अधिकारीको तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको थियो । अधिकारीका परिवारको उजुरीको आधारमा प्रहरीले सो घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
चितवन रत्ननगरमा भएको सो घटनामा आरोपित ११ जनामध्ये पटक पटक गरेर चारजना समातिएका छन् । पछिल्लो पटक चैत्र ६ गतेको मध्यरातमा प्रहरीले दुईजनालाई समाएको छ । कृष्णका बुबाआमा नन्दप्रसाद र गंगामाया गएको कात्तिक सात गतेदेखि छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनु पर्ने माग राखेर काठमाडौंमा अनसन बसेका छन् ।
त्यस्तै, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा भट्टराईले अध्यादेशमार्फत संसद्बाट कानुन बनाएर आयोग गठनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
केहि दिनभित्र सदनमा विधेयक पेस गरी आयोग गठन हुने बताउँदै डा भट्टराईले भन्नुभयो, ‘आयोग बनेसँगै सत्यतथ्य बुझेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुन्छ । जघन्य मानवता विरोधी घटना भए कानुनमार्फत त्यसको समाधान हुन्छ ।’
विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म मारिएका १५ हजारमध्ये १२ हजार माओवादी रहेको भन्दै नेता भट्टराईले ती द्वन्द्वकालीन घटना ब्युउँताउनुभन्दा समाधानको बाटोतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँको प्रश्न थियो त्यसबेला काँग्रेस, एमाले सत्तामा थिए हामीले कसलाई मुद्दा लगाउने ?
अर्को फरक प्रसङ्गमा नेता भट्टराईले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट रूपान्तरण गर्ने बताउनुभयो । समाजवादी क्रान्तिको दिशातर्फ पार्टी गएको भन्दै उहाँले नीति र नेतृत्व सामूहिक ढङ्गले गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेकपा–माओवादीसँगमात्र नभएर वामपन्थी, देशभक्त र गणतन्त्रवादी सबैलाई एक बनाएर लैजाने तयारीमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा–माओवादीसँग तत्काल एकीकरणभन्दा पनि केही विषयमा कार्यगत एकता गरेर जाने धारणा राख्नुभयो । पुँजीवादी क्रान्ति सापेक्ष रुपमा अघि बढेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका भट्टराईले समाजवादी क्रान्तितर्फ पार्टी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं २२ फागुन । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा नरहेको बताएका छन्। वीपी...